Sola fide - Wikipedia
Ny andian-teny latina hoe Sola fide , izay midika ara-bakiteny hoe "amin'ny alalan'ny finoana irery", dia ainga fototra protestanta milaza fa ny asa tsara ataon'ny olona dia tsy mandray anjara amin'ny fanavotana azy. Ny teolojiana miteny malagasy dia mandika io andian-teny io hoe "Finoana irery ihany". Iray amin'ireo andian-teny latina dimy manomboka aminin'ny hoe Sola ny Sola fide.
Izany finoana izany dia ny finoana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy mitondra fanavotana teo amin'ny hazofijaliana noho ny fahotan'ny olombelona izay miaiky azy ho mpamonjy. Mamerina ny fihavanan'ny olombelona amin'Andriamanitra ny finoana izay hany fomba ahafahana mahazo famonjena, amin'ny Kristiana izany dia midika fiainana mandrakizay aorian'ny fahafatesana.
Ny finoana dia fanomezan'Andriamanitra tamin'ny fihaonan'ny isam-batan'olona amin'Andriamanitra, amin'ny alalan'i Jesoa Kristy. Ny finoana irery ihany fa tsy ny foto-pampianaram-pinoana (latina: doctrina) na ny asan'olombelona. Tsy mitovy ny fomba mahatonga io finoana io ao amin'ny olona tsirairay ka mety miseho tampoka izany na miandalana. Samy miaina izany finoana izany amin'ny fombany manokana ny olona tsirairay satria valin'ny fanehoan'Andriamanitra fitiavana ny finoana.
Ny foto-pampianarana ny amin'ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana (izay atao hoe koa "fanamarinana amin'ny alalan'ny finoana") dia nandray anjara betsaka tamin'ny fotoana nampisy ny Reformasiona (na Fanavaozam-piangonana) protestanta; rehefa i Martin Lotera izay nisahirana tamin'ny famonjena ny tenany sady tsy afa-po tamin'ny valintenin'ny Fiangonana tamin'ny fotoanandrony, nahafantatra amin'izay fa ny lanjan'ny Soratra Masina, raha namaky ny epistilin'ny Paoly ho an'ny Romana izy. Noho izany dia io foto-pampianarana io no vatofehizoron'ny Reformasiona protestanta. Io foto-pampianarana ny amin'ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana irery ihany io no mampiavaka ny protestantisma amin'ny fiangonana hafa, dia ireo izay manome lanja ny asa tsara na ny fombafombam-pivavahana hanatsarana ny olombelona mba hahafahany mandray anjara amin'ny famonjena ny tenany.
↑ Annick Sibué, Luther et la Réforme protestante, Paris, Eyrolles, 2011, pages 103-105.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Sola_fide&oldid=971711"
Dernière modification le 30 Jiona 2019, à 14:32
Voaova farany tamin'ny 30 Jiona 2019 amin'ny 14:32 ity pejy ity.